(3 Indlu Yekamelo Lokulala) -Ukuxoxa Ibanga ukusuka eDowntown. - I-Airbnb
(3 Indlu Yekamelo Lokulala) -Ukuxoxa Ibanga ukusuka eDowntown.
Lamagumbi okulala amathathu (3), indlu yokugezela eyi-1, ene-WiFi, ishawa elishisayo/ebandayo kanye nezindawo zokuphuma ezingu-110V, ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka edolobheni. Amafeni amile nawo ayatholakala.
Uma ufuna indlu eseduze nakho konke e-Kingstown, lena yindawo yokuhlala. Ukusondelana komgwaqo oyinhloko kwenza kube lula ukubona lapho “izimoto” (izimoto zokuhamba zomphakathi) zidlula. Ngakho-ke cishe ngo- $ 2.00 US, ungahamba uye enkabeni ye-Kingstown. Isitolo esincane sokuthenga ukudla simayelana nemizuzu engu-1 ukusuka endlini futhi isitolo esikhulu sokuthenga ukudla se-Massy sisekude ngemizuzu engu-4-5. Izingadi ze-Botanical nazo ziqhele ngebanga elifushane. Isiteshi sesikebhe sisekude ngemizuzu engu-10, nesevisi yansuku zonke eya e-Bequia kanye nezikhathi ezintathu (3)/ ngesonto ukuya e-Southern Grenadines.
Ibanga elithulile lokuhamba ngezinyawo ukusuka e-Botanical Gardens, i-Massey supermarket, i-Victoria Park, i-American University, isonto le-St. Mary 's Imper kanye ne-Milton Cato Memorial Hospital. Ukufinyelela kalula izinto zokuhamba ze-Minibus eMfuleni Road nase-Leeward Highway. Le ndlu iphinde ibe yibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukusuka edolobheni lase-Kingstown.
Yini i-Appwagen- Atlan-5443